Shaqooyin hal abuur leh maalinta shaqaalaha caalamiga ah | Abuurista khadka tooska ah
Maanta 1-da May waxaa loo dabaaldegaa casi qof kasta maalinta shaqaalaha caalamiga ah. Maalin nasasho dhammaantood iyaga oo ku sharfaya maamulkooda inta lagu jiro nasashada. Waxaa jira malaayiin shaqaale ah oo maanta daabaca sawiradooda maalin fasax ah kuna raaxeysta waqtigooda firaaqada. Marka hore, hambalyo! Maanta waxaan dib u eegeynaa shaqooyinka hal abuurka ah ee qarnigan iyo mustaqbalka.
Shaqooyinkani waa kuwa ugu caansan ee la xidhiidha mustaqbalka dhow. Farsamooyinka aan maanta gacanta ku hayno awgood, shaqooyinka noocan ah waxay noqon doonaan kuwa loogu yeero maalmaheena sida laga soo xigtay Jaamacadda Cambridge University Press.
1 Ahaanshaha YouTuber
3 Dunida ciyaaraha fiidiyowgu ma seegi karin
4 Naqshadeeyaha dharka
In kasta oo ay dadka qaar ku soo biirayaan awoodda youtubers xilliga dhexe iyo kan dheerba waa masiibo, kuwa kale runti waxay u maleynayaan inay ka mid noqon doonto shaqooyinka mustaqbalka. Barta youtube-ka ayaa is badalaysa. Laakiin sidoo kale waa inaad aragto sida shaqaale aad iyo aad u tiro badani ugu jiraan YouTube-ka. Maqnaanshaha xoojinta kaabayaasha oo lagu hago nuxur guud oo guud (oo la gaadhay sannadihii shaqaalahan). Waxay u noqon kartaa shirkad dhammaan dhagaystayaasha. Dabcan, xayeysiinta iyo warbaahintu waa inay u xuubsiibtaan waaxda.
Shakhsiyaadka qaarkood Spain iyo caalamkaba durba way ku nool yihiin. Oo layaabna maahan wax fudud oo dhan in loo guuro 26 milyan qof sida aad sameyso, tusaale ahaan, Ruby. Waxaas oo dhan, waxaa intaa dheer, 'adigoon guriga ka bixin'.
Ku sii wadida dhammaadka cusub «-EER laga soo qaatay Ingiriiska, waa xirfad kale oo ku soo socota isbeddellada. Creativos Online waxay tusaale u noqon kartaa tan, baloog lagu maareeyo in dad badan la gaarsiiyo taasna waxaa sii wadi kara xayeysiinta. Shaqadan qarnigii kow iyo labaatanaad ayaa sii kordheysa baahida loo qabo. Oo haddaan eegno oo keliya bogagga caadiga ah, waxaan arki karnaa sida baloogyada sawirku u jiraan (Macallimiinta).
In kasta oo ku dhowaad baloog kasta uu kicin karo xiisaha maanta, waxaa jira dhowr kuleyl ah. Bogga Actualidad waxaa ku yaal boosas badan oo xiise weyn leh sida Recetín, Actualidad Motor, Actualidad Iphone iyo dabcan, Abuurista khadka tooska ah.
Dunida ciyaaraha fiidiyowgu ma seegi karin
Haddii aadan wali ciyaarin wax cayaaro fiidiyoow ah, waxay ka dhigan tahay in ugu yaraan aad ku luntay hawdka. Maalin kasta, laga bilaabo madal kasta, waxaan ku aragnaa ciyaartoy nooc kasta oo ciyaar ah. Waqti dheeri ah, marka cayaaraha kali ah ay u baneynayaan cayaaraha ciyaartoy badan. Laga soo bilaabo qoraal ilaa cod dheer lala hadlayo cadaawayaasha.
Waa wax caqli gal ah in laga fikiro in mustaqbalka tani ay noqon doonto xirfadda ama midkood, ka weyn oo ay codsadeen jiilalka cusub. Oo midkood baa noqon doona Tijaabiyaha Videogame. Wax dad badani riyo u noqon lahaayeen, tijaabinta cayaaraha fiidiyowga ma aha wax ka badan xaqiijinta in ciyaarta fiidiyowga ay buuxineyso shuruudaha. Heer garaaf ah, taariikh, ciyaartoy badan, iwm. Tijaabiyaha ayaa noqon doona qofka mas'uulka ka ah qiimeynta in sheygan uu suuqa u aado xaaladaha ugu wanaagsan.
Haddii aad xiiseyneyso shaqadan, oo aad rabto inaad wax badan ka ogaato habka hal-abuurka ah ee ciyaaraha fiidiyowga, waxaa jira shaqooyin loogu talagalay in lagu tababaro xirfadleyda qaybtan. Qaarkood waa Shahaadada Animation-ka Jaamacadda iyo Masterka ee Naqshadeynta iyo Horumarinta Playstation First.
Inkasta oo shaqadani horeyba u haysatay waqtigeedii, markay aragtay sida sawirku maanta yahay, waxay umuuqataa inay macno ka samaynayso sidii hore.. Kahor intaanay ahayn xirfad ay leeyihiin aqoonyahanada dhaqaalaha. Laakiin hadda, iyadoo la adeegsanayo baraha bulshada iyo fayraska nuxurka ayaa la dimuqraadiyey. Halkan waxaad u baahan doontaa inaad horumariso hal-abuur badan, maxaa yeelay dhab ahaantii kuma saleysna dhadhan gaar ah. Waa halkii dhibic ugu adkaa ee tartanka. Halkan haddii ay tahay inaad iska dhigto mid aad u soo jiidasho badan si aad u istaagto.
Uguyaraan taasi waa sida looga yaqaan gudaha adduunka. Waxaa sidoo kale loo aqoonsan karaa inay yihiin ugaarsadeyaal isbeddello ah ujeedooyinkooduna waa inay saadaal ka bixiyaan isbeddelada ama soo ifbaxa ku saabsan dhaqanka macaamiisha iyo moodada. Qaboojiyuhu wuxuu ka sarreeyaa dhammaan cilmi-baare bulsheed, kaas oo falanqeyn doona oo su'aalo ka weydiin doona hareerahiisa si uu isugu dayo inuu saadaaliyo sida wax isu beddelayaan mustaqbalka dhow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Shaqooyin hal abuur leh maalinta shaqaalaha caalamiga ah